Sida Loo tirtiro Koo Account | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Sida loo tirtiro Koo Account
Koo App waa beddelka Twitter-ka, madal-blogging-yar. Waxaa la sameeyay intii lagu jiray cadho caalami ah oo ka dhan ah Shiinaha sababo badan dartood. Qof kasta ayaa isla markiiba doonayay inuu mamnuuco app-ka Shiinaha oo wuxuu rabay inay dhistaan ​​beddelaadkooda guriga. Koo wuxuu ka mid ahaa abka ka soo baxay cadhadan ka dhanka ah shirkadaha farsamada ee Shiinaha.
Markii la bilaabay App-ka waxaa buux dhaafiyay isticmaaleyaasha, qof walbana wuxuu bilaabay inuu ku faano app-ka Koo WhatsApp-kiisa iyo xitaa Twitter-ka. Laakiin, markii dambe, app-ka waxaa la ogaaday inuu leeyahay qaar ka mid ah xidhiidhada Shiinaha. Marka laga reebo in, app waxaa ka buuxay cayayaanka iyo sifooyinka aasaasiga ah ayaa shaqaynayey. Waxay ka dhigtay dadka inay si dhakhso leh uga baxaan goobta si ka dhaqso badan inta ay dadku ku soo biireen goobtan.
Waa kan mid ka mid ah dhiqlaha aan shaqsi ahaan la kulmay oo igu qasbay inaan ka tago madasha:
Ka fikir inaad tijaabiso Koo App. Ka dib ayaa gartay qaladkayga.
Koo App: Waxaan ku bedelaynaa Twitter-ka Hindiya
Sidoo kale Koo: pic.twitter.com/Hxkyj0WweT
- Abhishek Verma🇮🇳 (@w3Abhishek) Febraayo 26, 2021
Haddii aad rabto inaad si joogto ah uga baxdo goobta, waxaan wadaagi doonaa tillaabooyinka lagu tirtirayo xisaabta Koo. Waxaad raaci kartaa talaabooyinkaas oo aad tirtiri kartaa akoontiga Koo si joogto ah.
Sidee loo tirtiraa Koontada Koo?
Si aad u tirtirto Koontada Koo, raac talaabooyinkan:
Fur Koo Appka oo u gudub qaybta Profile Koo
Taabo summada gear-ka si aad u furto Koo App Settings
Taabo Tirtir ikhtiyaarka hoosta Dejinta Xisaabaadka
Xaqiiji inaad tirtirto Koontada Koo si joogto ah
Koontada Koo waxa lagu tirtiri doonaa 30 maalmood gudahood
Fiiro gaar ah: Waad soo noqon kartaa oo geli kartaa si aad u soo ceshato akoonkaaga 30 maalmood ka hor waana lagu soo celin doonaa. Laakin 30 maalmood kadib, Koontada Koo si joogto ah ayaa loo tirtiri doonaa.
Ma helay maqaalkan mid waxtar leh? La wadaag baraha bulshada wax su'aalo ah ma qabtaa? Weydii qaybta faallooyinka ee hoose, waxaan uga jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Goobaha Twitter: Cusbooneysiin yar oo loogu talagalay martigeliyayaasha
Twitterka oo ka shaqaynaya calaamadaha digniinta si ay wax uga qabato macluumaadka khaldan
Xayeysiiska Fleets Twitter ayaa ku soo socda, halkan waa muuqaalkii ugu horreeyay
Android 12 Wallpaper Stock Download lacag la'aan
Maalinta Ra'iisul Wasaaruhu 2021-ka oo La Hooseeyay Inkastoo Tartamayaasha
Lenovo waxay soo bandhigtay Tab P11 Plus, kaniini qoys oo awood leh